सेवाहरू जुन एप्पलले प्रस्तुत गर्दछ र स्पेनमा कहिल्यै शोषण गर्दैन आईफोन समाचार
एप्पलले प्रस्तुत गरेको सेवाहरू र स्पेनमा कहिल्यै शोषण गर्दैन
आज हामी यहाँ छौं शाब्दिक पछाडि फर्केर। हामी यी प्रकारका सेवाहरूको अलि समीक्षा गर्न जाँदैछौं जुन एप्पलले नवीनता र कार्यक्षमताका रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, तर त्यो कुनै अज्ञात कारणले स्पेनमा कहिल्यै शोषण गर्दैन। यस सन्दर्भमा कपर्टिनो केटाहरूको पारसिभिता केहि अवसरहरूमा अचम्मको कुरा हो, ¿¿एप्पलले कति सेवाहरू, सफ्टवेयर र अनुप्रयोगहरू प्रस्तुत गरेको छ र स्पेनमा हामी रमाईलो गर्दैनौं? दुर्भाग्यवस तिनीहरू धेरै धेरै छन् र आज हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौं, बुझ्ने कोशिस गर्दै किन यो नराम्रो एप्पल यसको स्पेनिश जनतालाई।
यद्यपि यो सत्य हो कि स्पेनमा एप्पल मार्केट सेयर नगण्य छ, एन्ड्रोइड उपकरणहरूले स्पष्ट रूपमा प्रभुत्व जमाएको क्षेत्र। यस सम्बन्धमा स्पेनको सीमान्तिक अवस्थाको लागि कुनै बहाना छैन।
2 स्याउ पे
3 आईफोन अपग्रेड कार्यक्रम
नजान्ने मानिसका लागि (र यो सामान्य छ यदि तपाईंले लामो समय सम्म हामीलाई पछ्याउनु भएन), समाचार भनेको प्लेटफर्म हो जुन एप्पलले सबै प्रकाशकहरूको हातमा खबर ल्याउनका लागि सिधा तपाइँको आईओएस उपकरणमा ल्यायो तपाइँलाई तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू वा सामाजिक नेटवर्कहरूमा जानको लागि आवश्यकता बिना। समाचारलाई धन्यवाद छ तपाइँ एकै स्थान मा तपाइँको रूचि को सबै समाचार स have्कलन गर्नुहुनेछ, विश्व स्तरीय प्रकाशकहरु र न्यूजकास्टहरु यहाँ आफ्नो गतिविधि प्रकाशित। तपाइँलाई एक विचार दिनको लागि, सबैभन्दा नजिकको चीज फ्लिपबोर्ड हुनेछ, पाठ्यक्रमको दूरीहरू बचत गर्दै।
खैर, यहाँ हामीसँग सेवाहरू छन् जुन एप्पलले प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्छ र त्यो कहिले पनि स्पेनमा पुग्दैन। भर्खरको जानकारीका अनुसार समाचारमा already करोड भन्दा बढी अनौंठो प्रयोगकर्ताहरू छन् र महत्त्वपूर्ण विज्ञापन सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रश्न यो छ: हामी किन स्पेनमा केहि पढ्न सक्दैनौं? हामीलाई यसको कारण थाहा छैन जसका लागि एप्पलले न्यूजलाई हाम्रो इलाकामा मर्ने अनुमति दिएका छन्, यद्यपि यो आवेदन संयुक्त राज्य अमेरिका र युनाइटेड किंगडम दुबैमा एक बर्ष भन्दा बढि रहेको छ।
मोबाइल भुक्तान सेवा जसले संसारमा सब भन्दा सुरक्षित र विस्तारितको रूपमा आफूलाई घोषणा गर्ने लक्ष्य राख्यो। एप्पल पे पहिले नै ब्रिटेन, जर्मनी, स्विजरल्याण्ड, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, अष्ट्रेलियामा अवस्थित छ ... र स्पेनमा पनि हामी इमान्दार हुनुपर्दछ र याद गर्नुपर्दछ कि भाग्यमानीहरूले एप्पल पे प्रयोग गर्न सम्भव छ। गत वर्ष २०१ 2016 को डिसेम्बरदेखि स्पेनमा, सेवा प्रस्तुत भएको दुई बर्ष भन्दा बढी पछि र जहाँ यसको प्रयोगको लागि अनुमति दिइयो सफलताको घोषणा गरिरहेको थियो।
स्पेनको मामला बिभिन्न छ, यहाँ केवल तीन प्लेटफर्मले तिनीहरूको क्षमताहरूको मज्जा लिन सक्दछन्: बान्को सान्तेन्डर, क्यारेफोर पास र टिकट रेस्टुरेन्ट। जसमध्ये एउटालाई मात्र टाउको देखि औंला सम्म वित्तीय संस्था मान्न सकिन्छ। स्पेनमा धेरै ठूला बैंकहरू जस्तै BBVA वा Caixa Bank यस सम्झौताबाट बाहिरिएका छन् जसले धेरै विवाद उत्पन्न गर्दछ। यसैबीच, स्पेनमा एप्पल भुक्तानी भनेको सयौं हजारौं प्रयोगकर्ताहरूको लागि सपना मात्र हो जुन आईफोन मार्फत हाम्रो पहिलो सम्पर्कविहीन भुक्तानी गर्न चाहान्छन् र सबै क्रेडिट कार्डहरू घरमै छोड्नेछन्।
आईफोन अपग्रेड कार्यक्रम
भर्खरको मोडल आईफोन प्राप्त गर्न कम्पनीसँग लड्न कत्ति गाह्रो छ, स्पेनमा उपलब्ध केही एप्पल स्टोरहरू मध्ये कुनै एकमा जाँदा र यसको लागि ठूलो पैसा खर्च गर्न जत्तिकै गाह्रो। जे होस्, एप्पलसँग के भनेर चिनिन्छ आईफोन अपग्रेड कार्यक्रमआईफोन s एसको आगमनदेखि नै आएको प्रणाली र यसले निश्चित मासिक मूल्य तिरेर हामीलाई वार्षिक आईफोन रिलिज गर्न अनुमति दिन्छ। जुन २० र e० यूरो बीचको हुन्छ। यद्यपि एप्पलले स्पेनमा यस प्रलोभनको सम्भावनालाई वेवास्ता गर्ने निर्णय गरे।
सँधै अप-टु-डेट रहनको एक तरिका जुन निस्सन्देह स्पेनमा धेरै शोषण गर्ने देश हो जुन अपरेटर्सको फाइनान्सिंगको फाइदा लिनको लागि झन् झन् अलिकताका मोबाइललाई प्रश्नमा लिन्छ। आईफोन अपग्रेड प्रोग्रामीटरले वार्षिक बर्षो उपकरण छोड्ने थियो।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » एप्पलले प्रस्तुत गरेको सेवाहरू र स्पेनमा कहिल्यै शोषण गर्दैन
एप्पल पे संग के एक जुनून। ठिक छ, तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ किनभने स्पेन केही स्थानहरूमा एक हो जहाँ तपाईंसँग भएको कुन बैंकले फरक पार्दैन, तपाईं एप्पल पे को उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ क्यारफोर पास मार्फत, जुन तपाईं दर्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कार्ड हो, तपाईं आफ्नो बैंक खातासँग सम्बद्ध गर्नुहुन्छ र रमाउनुहुनेछ। । के कारणले मलाई के उपयोग गरीन्छ कि १० बेंचको सेवा छ यदि ती मध्ये कुनै एक होईन भने? यस तरिका धेरै राम्रो छ। किनकि जसरी तपाईले सान्तेन्डरमा खाता खोल्नुहुन्न किनकि तपाईको पैसा अर्को बैंकमा छ, त्यस्तै कुरा हुन्छ यदि BBVA र सबाडेल अन्ततः यदि म La Caixa छ र यदि म परिवर्तन गर्न चाहन्न भने। त्यसो भए त्यहाँ लेखहरू हुन्छन् किन ला Caixa प्रवेश गर्दैन?
खैर, EVO ले पुष्टि गर्यो कि यो एप्पल भुक्तानी हुनेछ।
सीमित समयको लागि नि: शुल्क डाउनलोड गर्न उपलब्ध ग्रेट फ्यूजन ग्राफिक साहसिक
यी WWDC17 मा विद्यार्थी-विकासकर्ताहरूको लागि आधारहरू छन्